Osprey ဗွီဒီယိုသည်အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှုဖြင့်စျေးသက်သာ။ အသံလွှင့်အရည်အသွေးရှိသောဗီဒီယိုပေးပို့နိုင်သည့် Talon Hardware encoder အသစ်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » စျေးသက်သာ, သုံးစွဲမှုအများဆုံးလွယ်ကူမှုနှင့်အတူအသံလွှင့်-အရည်အသွေးဗီဒီယို Delivery များအတွက် Osprey ဗီဒီယိုဖြည့်စွက်နယူး Talon ဟာ့ဒ်ဝဲ encoding
စျေးသက်သာ, သုံးစွဲမှုအများဆုံးလွယ်ကူမှုနှင့်အတူအသံလွှင့်-အရည်အသွေးဗီဒီယို Delivery များအတွက် Osprey ဗီဒီယိုဖြည့်စွက်နယူး Talon ဟာ့ဒ်ဝဲ encoding
Dallas - မတ်လ 31, 2017 - stand-alone ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ၎င်း၏ Talon လိုင်းတိုးချဲ့ဖို့ပြောင်းရွှေ့ခုနှစ်တွင် - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှာစတင် NAB ပြရန် အဆိုပါဆုရ Talon G1 သုံးရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်အလှူငွေအန်ကုဒ်နှင့်အတူ - Osprey ဗီဒီယို ယနေ့အသစ်သုံးမျိုး Talon မော်ဒယ်များကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါကိရိယာနှစ်ခုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့်တဦးတည်းဒီကုဒ်ဒါ, သေးငယ်တဲ့ပုံစံအချက်အတွက်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုဖြန့်ဝေနှင့်အတူအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းပေါင်းစပ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်၏ဒီအဆင့်မကြုံစဖူးသောစျေးနှုန်းမှာ။
ပညာရေး-12 ကျပ် High-end ထုတ်လွှင့်ကနေအထိ enviroments မှာပလီကေးရှင်းတစ်ခုနီးပါးန့်အသတ်အရေအတွက်က addressing သစ် Talon ထုတ်ကုန်ရိုးရှင်းတဲ့ကို web interface ကိုတစျဆငျ့ကို set up ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြပြီးအနည်းဆုံးကွန်ယက်ကိုအရင်းအမြစ်များကိုလိုအပ်သည်။ configured ပြီးတာနဲ့သူတို့အသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲမူတည် 24 /7run နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောကော်ပိုရေးရှင်းဆက်သွယ်ရေးဌာနများနှင့်ဝတ်ပြုမှုအိမ်များအဖြစ် narrowcasting အခြေအနေတွေအတွက်တစ်ခုတည်းအန်ကုဒ်အသုံးပြုအဖွဲ့အစည်းများ, များအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်ပါသည်။ အသစ်က Talon မော်ဒယ်များနှင့်အတူထို enviroments မှာအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရ Set-က-and မေ့လျော့-ကြောင့်လည်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအော်ပရေတာကို run ဖို့အတှကျလုံလောကျမလှယျကူရဲ့ device ကို။
Osprey ဗီဒီယို'' s ကို Talon ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ embedded သရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုအတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤအစိတ်အပိုင်း OTT လိုင်းများမှအကြောင်းအရာများထုတ်လွှင့် Streaming အထူးသဖြင့်အခါ, ဖက်ဒရယ်စာတန်းထိုးပျပိုငျခှငျ့တွေ့ဆုံဘို့အရေးကြီးသည်။
ထို့အပွငျ, ရှိသမျှ Talon မော်ဒယ်များ Wowza လွှတိမ်တိုက် ", Youtube, Facebook မှတိုက်ရိုက်နှင့်, Zixi ပလက်ဖောင်းအပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင် streaming များပလက်ဖောင်းအချို့နှင့်အတူတင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှု, ပါဝင်သည်။ ထိုသို့သောပေါင်းစည်းမှုမြောက်မြားစွာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အများအပြား application များအတွက် streaming များဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ရှုပ်ထွေးလျှော့ချပေးပါတယ်။
"ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပေးသောစျေးကွက်ဝယ်လိုအား, ဟာ့ဒ်ဝဲ encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါအနီးကပ်ဒုတိယဖြစ်လာကြပါပြီ။ ကျနော်တို့ဒီထုတ်ကုန်လိုင်းတိုးချဲ့အဘယ်သူမျှမမှဒုတိယဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့်လွယ်ကူခြင်းထည့်သွင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်, "ဖြစ်သူ Scott Whitcomb မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာကပြောပါတယ် Osprey ဗီဒီယို။ အလွန်ငယ်ရွယ်င်ပေမယ့် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Talon ထုတ်ကုန်လိုင်းအသုံးပြုသူကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်အားလုံးကိုသေတ္တာများ check လုပ်ပေးပါတယ်, နှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ streaming များ၏စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကရဲ့တစ်ဦးသက်သေပြချက်ကုမ္ပဏီများထံမှသက်သေနည်းပညာနှင့်အတူ, လက်ျာဘက်ပြုသောအမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါပေးခြင်းပါပဲ။ "
နယူး Talon ဟာ့ဒ်ဝဲအန်ကုဒ်မော်ဒယ်များကတော့ Talon G1H တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း HDMI အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနဲ့နိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာ Talon G1 အန်ကုဒ်သို့မဟုတ် CVBS ဗားရှင်း; နှင့် Talon G2, အ G1 ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်အတူကား Touch-screen LCD ပါ display နှင့်ရိုးရှင်းသောက start / ရပ်တန့်အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အတူတစ်ဦးအန်ကုဒ်။
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Osprey ဗီဒီယို မှာရရှိနိုင် www.ospreyvideo.com.
Osprey ဗီဒီယို'' s ကိုပရီမီယံဗီဒီယိုရိုက်ကူးနည်းပညာရှည်လျားသောလုပ်ငန်း, အစိုးရနှင့်အာကာသဖို့, ထုတ်လွှင့်, အင်တာနက်တီဗီနှင့်စောင့်ကြည့်ထံမှအထိစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မစ်ရှင်-အရေးပါဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေမောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ အခုတော့သူ့ရဲ့ flagship ဖမ်းယူကတ်များနှင့်ယာဉ်မောင်းအတွက်နည်းပညာကိုပိုပြီးရိုးရာ A / V ကိုအပါအဝင်, ဖောက်သည်များအားလုံး enviroments မှာအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက် ပို. ပို. မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များကျေနပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-streaming များနှင့် encoding ကထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏အဆုံးမှအဆုံးသို့လိုင်းများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သောပညာရေး, ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဝတ်ပြုမှုအိမ်များအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်မပြတ်, အရည်အသွေးမြင့်အဘို့ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်အစဉ်အဆက်-ဖြစ်ပေါ်နေသောဗီဒီယိုကပလီကေးရှင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော tools များက၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ် - IP ကိုကျော်ကဗီဒီယိုမှ စာတန်းထိုး, ဖမ်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး & နှင့်ကျော်လွန်ပြီး 4K မိုဘိုင်း streaming များ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.ospreyvideo.com.
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/Osprey/OspreyVideo-TalonG2ContributionEncoder.png
Image ကိုစာတန်းထိုး: Osprey ဗီဒီယို Talon G2 အလှူငှပေးကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/Osprey/OspreyVideo-TalonG1HEncoder.png
Image ကိုစာတန်းထိုး: Osprey ဗီဒီယို Talon G1H H.264 ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/Osprey/OspreyVideo-TalonG2Decoder.png
Image ကိုစာတန်းထိုး: Osprey ဗီဒီယို Talon G2 ဒီကုဒ်ဒါ
အလည်အပတ် Osprey ဗီဒီယို အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Booth SU12221
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20adds%20new%20%23Talon%20hardware%20encoders%20for%20affordable,%20broadcast-quality%20video%20delivery%20with%20ease%20of%20use.%20-%20https://goo.gl/hkIhAq
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း hardware ဒီကုဒ်ဒါ hardware အန်ကုဒ် NAB 2016 NAB16 Osprey ဗီဒီယို Talon Talon G1H H.264 ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Talon G2 အလှူငှပေးကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Talon G2 ဒီကုဒ်ဒါ ဗီဒီယို 2017-03-31
ယခင်: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ DigiLink နှင့် InfinityLink အတူအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်မှုကိုတိုးပှားရည်ရွယ်
နောက်တစ်ခု: ဖြစ်သော CBS သတင်း Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အတူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်သက်တမ်းတိုးမည်